आर्थिक अभावले छट्पटाउदै वोनम्यारो पीडित चन्द्रप्रसाद – Rajmarg Online
दाङ, असार २५ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ दुन्द्राका बोनम्यारो पीडित चन्द्रप्रसाद वलीले आफ्नो उपचारका लागि सहयोगको याचना गर्नुभएको छ । रोजगारीको शिलशिलामा भारतको पञ्जाव स्थित लुदियानाको एक होटलमा कार्यरत वलीलाई दुई वर्ष पहिले बोनम्यारो भएको थियो ।
चन्द्रप्रसादको उपचारका लागि सहयोग गर्न वली परिवारले अनुरोध गरेको छ । घोराहीको कुमारी बैंक घोराही सहिदमार्गमा रहेको बैंक खाता नं. १०११७३९४००१२५० मा सहयोग गर्न पीडित वलीको श्रीमती तुल्सीकुमारी वलीले बताउनुभयो । साथै सहयोग गर्न ईच्छुक सबैले मोबाईल फोन नं. ९८२२९९६३७४ मा सम्पर्क गर्न सक्ने परिवारले बताएको छ ।